Sooftiweer si toos ah loogu gudbiyo nambarada roulette-ka ee tooska ah waraaqda 'Excel'
Haddii aad u isticmaasho 'Excel' inaad ku horumariso nidaamkaaga roulette, Ciyaarta 2 Xls gabi ahaanba waa inay noqotaa qayb ka mid ah barnaamijkaaga software-ka.
Thanks to mashiinka qabashada software-ka cusub Screen Capture Engine jahooyin cusub ayaa u furmaya barnaamijyada mustaqbalka ee ThatsLuck.
Markaan u wakiishay qayb ka mid ah aqoonsiga nambarada qadka internetka softiweer madax-bannaan, dhab ahaantii, waxay ii oggolaaneysaa inaan ka dhigo qaybta horumarinta ee codsiyada cusub runti mid foogan oo aad u dhaqso badan, oo ay ku jiraan barnaamijkan cusub ThatsLuck, oo aan cinwaan uga dhigay Ciyaarta 2 Xls.
Kahor intaadan sii wadin xusuusnow taas ThatsLuck sidoo kale waxaad ka heli kartaa waxyaabo bilaash ah, haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso qoraalada iska qor kanaalka ► YouTube.
Isticmaal waraaqaha Xls si aad ugu ciyaarto roulette
Waxaan aaminsanahay in isla marka barnaamij lagu sameeyo luqad gaar ah, Excel ay tahay barnaamijka ugu fiican ee lagu horumariyo laguna tijaabiyo nidaamyada guuleysan roulette online.
Xaqiiqdii, waxaa jira degmooyin aan la tirin karin oo bixiya xaashiyaha loo diyaariyey roulette, iyo sidoo kale kumanaan isticmaaleyaal ah, oo ay ugu mahadcelinayaan awoodda weyn ee Excel, ay awoodaan inay abuuraan waraaqo Xls ah.
Dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah in markii aan abuurnay xaashiyahayaga xisaabeed, tirooyinka router-ka waa in gacanta mid mid lagu geliyaa markiiba.
Thanks to software-ka cusub Ciyaarta 2 Xls xitaa nidaamkan daallan si buuxda ayaa otomaatig loogu noqon karaa, iyadoo laga helayo dhammaan faa'iidooyinka la xiriira.
Roulette 2 Xls: sidee u isticmaashaa barnaamijka?
Ciyaarta 2 Xls waa wax aad u fudud in la isticmaalo, runtiina waa arrin uun in la furo miiska casino, waraaqahayaga 'Excel' iyo barnaamijka loogu talagalay qabashada tooska ah ee lambarada la xushay. Screen Capture Engine.
Barnaamijku wuxuu leeyahay dhowr ikhtiyaar oo fudud: midigta, tusaale ahaan, waxaa jira dhammaan dejimaha loogu talagalay Khamaarka Ka-goynta Anti; haddii xaqiiqda aan dooneyno inaan baxno saacado ama maalmo Ciyaarta 2 Xls si loo ururiyo xogta, si fudud u hawlgeli ikhtiyaarkan oo dhowrkii wareeg ee wareega ah ee bot wuxuu ku sharxi doonaa casaanka iyo madow oo leh hal cutub, kaliya ayaa ku filan in aan laga jarin casino.
Waxa kale oo suurtagal ah in la hubiyo in xaashidayada 'Xls' ay had iyo jeer ku sii jirto wejiga hore ee desktop-ka, xitaa marka aan gujino khamaarista miiska, si loo gaaro tan si fudud loo doorto ikhtiyaarka Excel On Sare Set, laakiin tan kaliya kadib markaad ka doorato daaqada 'Excel' menu-ka soo-dhaca.
Fursadaha intiisa kale ee saxda ah waxay khuseeyaan iskuduwaha la galayo si loo helo qodobbada kala duwan ee shaashadda ee u dhigma casaanka / madow iyo qaybta ugu yar ee lagu soo xulayo sharadka.
Sida iska cad, haddii halkii duubista lambarrada aan u isticmaali lahayn xaashigeenna 'Excel' si aan u ciyaarno, muhiim ma aha in la kiciyo doorashadan.
Laga soo bilaabo Roulette ilaa xaashidaada 'Excel': sida loo gudbiyo xogta
Dhinaca bidix ee barnaamijka waxaad dooran kartaa inaad u gudbiso xogta xaashida 'Xls sheet', runti waxaad sidoo kale diiwaan gelin kartaa lambarada oo waxaad ku keydin kartaa faylka qoraalka ujeeddooyin kale.
Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato dhammaan waraaqaha 'Excel' ee aad ugu sameysay roulette, kaliya sax sax Ku Xls Cell oo dooro haddii aad rabto inaad mar walba ku gudbiso lambarrada isla unugga xaashidaada Xls (ikhtiyaar Hal unug), ama ku dar midba mar safka, kana bilaabaya unug gaar ah (ikhtiyaar Safka).
Labada beerood SET isla markiiba hoosta waxaad ku dhejin doontaa xarafka hore ee unugga la doortay iyo nambarka unugga.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad hesho xogta ku jirta safka laga bilaabo unugga D14 ee xaashidaada, waxaad geli doontaa 'D' qaybta bidix iyo '14' midda saxda ah.
Waqtigan xaadirka ah waa inaad riixdaa badhanka Start on software qabashada Screen Capture Engine (taas oo iska cad inay tahay in loo qaabeeyo sidii aad horayba ugu aragtay casharradii kala duwanaa ee on YouTube) iyo haddii wax walboo si sax ah loo dejiyey, lambar kasta oo roulette ah waxaa loo wareejinayaa xaashidaada Xls, sida saxda ah meesha aad rabto!
Gunno: xaashida Xls ee loogu talagalay tirakoobka Roulette!
cunt Ciyaarta 2 Xls Sidoo kale waxaa kujira warqad Xls ah oo loogu talagalay in si otomaatig ah loogu shaqeeyo Tirakoobka Roulette, kaas oo aad ku sameyn karto dhammaan tijaabooyinka si aad u barato sida looga faa'iideysto kartida kan cusub software roulette.
Xaashida 'Xls' waxaa lagu ilaaliyaa lambarka sirta ah ee furitaanka (lambarka sirta ahi wuxuu lamid yahay koodhka hawlgalka softiweerka), taas oo aad iska nadiifin karto.
Soo Degso Fayl	R2Xls.zip - 2 MB